Bernando:Labo Halyeeyo hore oo Man United ayaa iga caawisay inaan kubiiro City
Sunday, May 27th, 2018 - 12:37:54
Saturday September 09, 2017 - 11:32:23 in Wararka by Kubad Bile
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City Bernardo Silva ayaa shaaca ka qaaday in labada ciyaaryahaan ee hore usoo martay kooxda Man United Nani iyo Ronaldo ay kuqanciyeen inuu sameeyo doorasho sax ah kuna biiro kooxda Manchester ka dhisay ee City.
Intuu socday mashquulka suuqa kala iibsiga qaarada yurub. ciyaaryahaanka u dhashay dalka Portugal ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee Pep Guardiola kooxdiisa kusoo biiray xagaagan iyagoo £43milyan ay bishii May dhamaadkeeda kaga soo qaateen Monaco.
Asigoo ka hadlaayay kahor kulanka City gurigeesa kusoo dhaweyn doonaan kooxda Liverpool. 23-sano jirkaan ayaa sheegay Ronaldo iyo Nani in ay u sheegeen. "Kubiiritaan City in ay u noqon kartoo dhaqdhaqaaq weyn"
Silva ayaa usheegay FourfourTwo"Markaa joognay Confederation Cup. waxaa weydiiyay Cristiano Ronaldo iyo Nani wax ku saabsan Manchester. waxee ii sheegeen sida saa'id ka ay u jecelyihiin Manchester"[Magaalada Manchester]
"Waxa ay ii sheegeen dadka oo idil in ay yihiin kuwa weyn. Manchester-na ay tahay magaalo dhab ku kubada cagta"
"Premier League sidoo kale.- waa horyaal tartan garoomada isbuuc walba ay buuxaan. qof walbana ii daawado. labadooda waxey ii sheegeen dhaqdhaq weyn inay noqon donnto"